देउवा र पौडेललाई सर्वोच्च नेता बनाउने निधिको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च नेता बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आफ्नो प्रतिवद्धता र योजना सार्वजनिक गर्दै निधिले आफू सभापति भए देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सर्वोच्च नेता घोषणा गर्नुपर्ने बताए । विगतमा गणेशमान सिंहलाई सर्वोच्च नेता मानिएको उदाहरण दिदै निधिले आफू […]
गण्डकीमा पौडेल पक्षको पकड, हेभिवेट हार्दा को को भए विजयी?
पोखराः नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह शतप्रतिशत जित निकाल्न सफल बन्यो। प्रदेशमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पौडेल पक्ष गरी दुई प्यानल निर्वाचनमा होमिएका थिए। गण्डकीमा पदाधिकारी बाहेक सदस्यमा पनि पौडेल समूहले आफ्नो पकड जमायो। देउवा समूहका अर्जुन जोशीलाई पराजित गर्दै पौडेल पक्षका शुक्रराज…
गण्डकीमा देउवा र पौडेल पक्षबिच कडा प्रतिस्पर्धा : कसले मार्ला बाजी?
पोखरा : स्थानीय तहदेखि नै नेपाली कांग्रेस अधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबिचको प्रतिस्पर्धा प्रष्ट देखिएको छ। पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशको अधिवेशनका क्रममा देउवा र पौडेल पक्ष प्यानल बनाएरै निर्वाचनमा होमिएका छन्। जसका लागि आज शनिवार पोखराको प्रर्दशनी केन्द्रमा मतदान जारी छ। गण्डकी वरिष्ठ नेता…
दैलेखको दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसको अधिवेशनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार भएको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र अधिवेशन अन्तर्गत दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सफल भएको छ ।कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पौडेल पक्षको जग भत्काउँदै जित हात पारेको अवस्थामा दैलेखमा भने देउवा पक्ष नराम्ररी पराजित भएको छ । क्षेत्र नम्बर १ मा एक जनाबाहेक अन्य सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि पौडेल पक्षका निर्वाचित भएका छन्
काठमाडौं, कार्तिक २७ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनका लागि छैटौं पटक तोकिएको मिति आउन एक महिना बाँकी रहँदा संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरू आआफ्नो तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्। दुवै समूहमा नेतृत्वका आकांक्षी बढेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल आआफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन लागिपरेका छन्। तर पछिल्लो पटक निर्धारित […]
देउवा पछ्याउँदै पौडेल
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निरीक्षण गरेको हप्ता दिन नहुँदै उनकै दलका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुनः उक्त क्षेत्रमा निरीक्षण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले निरीक्षण गरेको पाँच दिनपछि व...
काँग्रेस पालिका अधिवेशन : दाङमा देउवा र पौडेल बराबरी
दाङ । नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत दाङमा शनिबार सम्पन्न पालिका अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बराबर स्थानीय तहमा जित निकालेका छन् । जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा स्थानीय तह देउवा पक्षले विजयी हाँसिल गरेको छ भने पाँच स्थानीय तहमा पौडेल पक्ष निर्वाचित भएको छ । १० पालिका मध्ये शान्तिनगर र राप्ती गाउँपालिकाका सभापति सर्वसम्मत चयन गरिएको थियो । बाँकी
सल्यानका स्थानीय तहमा देउवा र पौडेल समूहबाट बराबर नेतृत्व
सल्यान : नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह अधिवेशनअन्तर्गत सल्यानमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पाँच÷पाँच स्थानीय तहमा नेतृत्व लिएको छ। शनिबार सम्पन्न अधिवेशनमा १० स्थानीय तहमध्ये दुई स्थानीय तहमा सर्वसम्मत भएको थियो। बाँकी आठमा स्थानीय तहमा चुनाव भएको थियो। सर्वसम्मतबाट विजयी हुनेमा त्रिवेणी गाउँपालिकामा गंगाराम पुन देउवा समूहका का हुन्। सिद्ध कुमाखमा सहमतिमा सभापति भएका वीरबहादुर बुढाथोकी पौडेल समूहका हुन्।यस्तै, चुनावबाट बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका सभा
देउवा र पौडेल दुवै खेमामा फाटो, अब को कता ?
काठमाडौं, १७ असार । नेपाली काँग्रेसमा एकाथरी नेता कार्यकर्ता पार्टी एकढिक्का हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्कातर्फ काँग्रेसमा गुट उपगुट बढ्ने र नयाँ ध्रुवीकरण हुने क्रमले गति लिएको छ । भदौमा तय भएको १४औं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमामा फुट देखिएको छ । देउवाबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि टाढिएका […]
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । आइतवार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेकाे बैठकमा सरकार गठनको विषय र साेमवार (भोलि) बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्ने योजना रहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपस्थित नहुँदा महतपूर्ण विषयमा निर्णय हुन सकेन । देउवा र पौडेल कार्य व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । तर साेमवारकाे केन्द्रीय समितिको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरणका काम र समायोजनबारे छलफल गर्ने सामान्य एजेन्डा तय गर...